22 พ.ค. 2563 - 22:59 น.
ကိုယ်ထဲက ဆဲလ်တွေမှာ ဗိုင်းရပ်စ် ပွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ အင်ဇိုင်းကို ဒီဆေးက တားပေး
ဒီဆေးကို အမေရိကန် ဆေးကုမ္ပဏီကြီး Gilead ဂိလိယတ်က မူရင်းထုတ်လုပ်တာ ဖြစ်ပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အခြေစိုက် Beximco ဆေးကုမ္ပဏီကနေ ဒီဆေးနဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေတူညီတဲ့ အလားတူ အမျိုးအစားဆေးကို ထုတ်လုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ပညာရှင်တွေက ဒီဆေးကို ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အတွက် အစွမ်းထက်မှော်ဆေးလုံးလို့ မမြင်ကြနဲ့လို့ ပြောထားပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အခုလောလောဆယ်မှာ ကိုဗစ်ကို ထိထိရောက်ရောက်ကုနိုင်တဲ့ဆေး ဘာမှ မရှိသေးလို့ နိုင်ငံတော်တော်များများက ဒီဆေးကို စမ်းသပ်ကြည့်ချင်နေကြပါတယ်။
Beximco က ထုတ်မယ့်ဆေးကို အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံတော်တော်များများဆီ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ဖြန့်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အိန္ဒိယနဲ့ ပါကစ္စတန် ကုမ္ပဏီ ငါးခုတို့က မြန်မာအပါအဝင် ဝင်ငွေနည်းပါးတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ ဝင်ငွေအလယ်အလတ်အောက်နိမ့်တဲ့ နိုင်ငံ ၁၂၇ ခု အတွက် အဲဒီကိုဗစ်ဆေးတွေ ထုတ်ဖို့ အမေရိကန်ဆေးကုမ္ပဏီကြီး ဂိလိယတ် နဲ့ သဘောတူခဲ့ကြတယ်လို့ မေလလယ်မှာ ကြေညာထားခဲ့ပါတယ်။
ဆေးစထုတ်မယ့်အချိန်နဲ့ စျေးနှုန်းတွေ ပြောဖို့ စောလွန်းသေးတယ်လို့ အဲဒီထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ အိန္ဒိယဆေး ကုမ္ပဏီတစ်ခုက ပြောပြီး ဇွန်လလောက်ကျရင် ဒီအခြေအနေတွေကို သိနိုင်မယ်လို့ အဲဒီဆေးကုမ္ပဏီက ပြောပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ကိုဗစ်ဆေး ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ပထမဆုံး စထုတ်